Adobe dia namoaka ny Sketch sy Comp CC ao amin'ny Play Store; fanavaozana ny Illustrator | Androidsis
Indray andro any dia ho azontsika atao ny manana Adobe Photoshop iray manontolo eny an-tanantsika mamerina ireo fiasa tsara indrindra izay ananantsika anio. Na dia izany aza dia mbola hisy kely ihany, satria finday avo lenta mahery sy takelaka Android matanjaka kokoa noho isika izao no ilaina. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mitaraina ihany koa isika, ary raha ampitahaintsika ny fahaizanay amin'ny fanovana sary tamin'ny telo taona lasa izay, niova be ny raharaha.
Vao namoaka Photoshop Sketch sy Comp CC tao amin'ny Android i Adobe, izay miaraka aminy fampiharana roa ho an'ny famolavolana sary sy famoronanaAnkoatry ny fanavaozana ny sary Illustrator dia misy fiasa vaovao. Comp CC dia fitaovana famolavolana ho an'ny efijery sy fanaovana pirinty, raha ny Photoshop Sketch kosa dia mikendry kokoa hanao sary sy fanaovana sary araka ny lazain'ny anarany. Ka ho fantatray ny antsipirian'ny tsirairay ary ny fomba itiavan'i Adobe anao hamorona.
Fampiharana iray ahafahanao manao fihetsika amin'ny efijery, toy ny boribory (na dia tsy dia voasarika aza), mba mamorona endrika marina azonao ovaina arakaraka ny sitrakao dia ovao ny volony na ny hafatrany miaraka amin'ireo toetra hafa. Amin'izany fomba izany, miaraka amin'ny fahaiza-manao sy talenta kely, afaka mamorona endrika tena manokana sy avo lenta ianao raha manokana fotoana hanaovana izany.
Amin'ny voalohany dia hanana eo alohanao ny modely samihafa, toy izany koa ho an'ny Android (1080 x 1920), ka hanombohanao mampiseho ny lalan'ny zavakantoo rehetra. Mampiditra endrika, lahatsoratra ary sary amin'ny findainao ianao, ary amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa dia azonao atao ny mamorona ny famoronana sary famantarana na lahatsoratra manaitra.
Afaka miditra amin'ny torolàlana sy grids ianao ampifanaraho ary ataovy amin'ny fanaraha-maso isan-karazany spacing, ary koa ny fidirana amina endritsoratra matihanina amin'ny teknolojia Typekit. Ary farany, rehefa manana ny endriny vita ianao dia afaka mandefa azy ho azy any amin'ny InDesign, Illustrator na Photoshop. Ary io dia ny fahafahanao miditra amin'ity traikefa rehetra ity amin'ny famolavolana dia tsy maintsy ataonao amin'ny alàlan'ny kaonty Creative Cloud anao izany. Mazava ho azy fa manana an'io maimaim-poana ianao, koa aza matahotra fa tsy voaloa io.
Ity fampiharana ity dia mitovy ihany, fa mifantoka amin'ny sary malalaka indrindra ary amin'ny famoronana ireo kisarisary ireo izay mety ho fototry ny karazana sary sy asa famoronana. Ho anao izay zatra amin'ny fampiharana sary hafa, toa ny Photoshop ao amin'ny biraony na ny findainy, dia kely dia kely ny fahasamihafana hita.
Ny fampiharana dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana anao a borosy sy pensilihazo maromaro, manomboka amin'ny mety ho loko rano ka hatramin'ny akrilika, ny pastel ka hatramin'ny ranomainty, ny marika amin'ny spaonjy. Ny endrika dia misy koa eto toa ny Comp CC, mba hahafahanao milalao eo anelanelan'ny zavatra mamorona sy endrika voafaritra kokoa miaraka amin'ireo zorony sy zoro mivaingana kokoa.
Tsy azon'izy ireo an-tsaina ireo sosona azo ampiana toy izany manaova sarisary amin'ny sary olona iray ary manandrana mizaha toetra ny fahaizantsika maka sary. Raha atambatra dia hanana fitaovana 11 ianao hahafahanao manao asa isan-karazany amin'ny famoronana, mamorona borosy isan-karazany tsy manam-petra amin'ny fampiasana Capture CC, malefaka handamina ireo fitaovana sy loko tianao indrindra ao amin'ny varavarankelinao ary, farany, ny fahaizana mandefa ireo sarisary ireo amin'ny Photoshop na Illustrator misy sosona voatahiry.
Mba hamaranana dia manana Adobe Illustrator Draw isika nohavaozina niaraka tamin'ny fanamainana borosy, izay ahafahanao mifehy ny tsindry sy ny hafainganan'ny fikorianan'ny borosy sy ny endrika na ny fihodinan'ny tendrony. Misy koa karazana fanamboarana bibikely sy fanatsarana fahombiazana tsara mba hiampitan'ny rantsan-tànanao ny pikselan'ny efijery ary afaka misintona ianao toa ny tena Leonardo da Vinci.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Adobe dia namoaka Photoshop Sketch sy Comp CC tamin'ny Android